Ulo | TRINITY
TRINITY na-enye ọkachamara azịza zuru ụwa ọnụ maka oghere maka mkpokọta.
Star Hotel arịa ikpe
Ngalaba Furniturelọ A na-ahụ Maka Ebube
Ofu Ngwongwo Ndozi
Ileba Ngwongwo Ọha nke Ọha
Caselọ oriri na ọ Restauranụ Restauranụ ụlọ oriri na ọ Restauranụ .ụ
$ $> TRINITY Hotel Furniture Manufacturer
Foshan Zhongsen （TRINITY） na-enye ọpụrụiche zuru ụwa ọnụ maka arịa ụlọ maka Hotels, Resorts, Villas, Ulo na oghere ndị ọzọ niile dịka Reslọ oriri na ọtaụ andụ na ụlọ ọha.
MODBỌR MOD NSỌ
Mepụta ngwaahịa kachasị mma na ụlọ ọrụ ma mee ngwaahịa kachasị mma.
TRINITY bụ ụlọ nkwari akụ ụlọ nkwari akụ azụmahịa nke na-enye ndị ọkachamara ngwongwo ngwongwo.
Faillọ Suite - Ngwongwo ụlọ oriri na nkwari akụ
Faillọ Suite - Ngwongwo ụlọ oriri na nkwari akụIsi okwu: Ngwongwo ụlọ nkwakọba ego.Twodị ụlọ: ụlọ na ụlọ nkwakọba.Ojiji ejirila: lobbylọ oriri na nkwari akụ.Ngwa: Hotel, Resort, ụlọ ọrụ, Villa, ebe obibi ndị ọzọ.Styledị ụdị: imewe ọgbara ọhụrụ.Ihe: Osisi, ogwe osisi, akpụkpọ ahụ, akwa, akwa, igwe, mabul (marble)Asambodo: ISO9001 / SGS / Peefc.
Ụlọ suite ụlọ - Hotellọ nkwari akụ
Ụlọ suite ụlọ - Hotellọ nkwari akụIsi okwu: arịa ụlọ nkwari akụ.Ngwongwo ụlọ nkwari akụ: Mai House Saigoson Hotel - 5 kpakpando.Twodị ụlọ: ụlọ na ụlọ nkwakọba.Ojiji ejirila: lobbylọ oriri na nkwari akụ.Ngwa: Hotel, Resort, ụlọ ọrụ, Villa, ebe obibi ndị ọzọ.Styledị ụdị: imewe ọgbara ọhụrụ.Ihe: Osisi, ogwe osisi, akpụkpọ ahụ, akwa, akwa, igwe, mabul (marble)Asambodo: ISO9001 / SGS / Peefc.
Faillọ Suite Melite - Hotellọ Ntanetị Ngwakọta
Faillọ Suite Melite - Hotellọ Ntanetị NgwakọtaIsi okwu: Hotellọ oriri na nkwari akụ.Twodị ụlọ: ụlọ na ụlọ nkwakọba.Ojiji ejirila: lobbylọ oriri na nkwari akụ.Ngwa: Hotel, Resort, ụlọ ọrụ, Villa, ebe obibi ndị ọzọ.Styledị ụdị: imewe ọgbara ọhụrụ.Ihe: Osisi, ogwe osisi, akpụkpọ ahụ, akwa, akwa, igwe, mabul (marble)Asambodo: ISO9001 / SGS / Peefc.
Ụlọ suite ụlọ - Boutique ụlọ nkwakọba
Ụlọ suite ụlọ - Boutique ụlọ nkwakọbaIsi okwu: arịa ụlọ nkwakọba.Twodị ụlọ: ụlọ na ụlọ nkwakọba.Ojiji eji eme ihe: ulo oriri na nkwari akụ.Ngwa: Hotel, Resort, ụlọ ọrụ, Villa, ebe obibi ndị ọzọ.Styledị ụdị: imewe ọgbara ọhụrụ.Ihe: Osisi, ogwe osisi, akpụkpọ ahụ, akwa, akwa, igwe, mabul (marble)Asambodo: ISO9001 / SGS / Peefc.
Anyị ka na-ekwusi ike na ịdabere na nkwenye na nkwenye, na-elele ngwaahịa ndị ahụ na-aga n'ihu ma na-emeziwanye, n'ikpeazụ, ọ bụ naanị site na ụkpụrụ dị elu ka anyị nwere ike ịga nke ọma na asọmpi ogologo oge!
Dịka njiri mara maka etu esi arụ ụlọ dị, anyị na-eji isi sistemu Ego anyị na njedebe iji weta uru kachasị mma ọ bụla anyị rụrụ. Na mgbakwunye na sistemụ mmechi anyị na-akwụsị, anyị nwere ụlọ nrụpụta nke anyị nke na-eme ka ndị ahịa anyị nwee ọ enjoyụ uru kachasị mma na ọnụego, mma na arụmọrụ.
Anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị nke na-eme ka ndị ahịa anyị nwee ọ enjoyụ uru kachasị mma na ọnụego, ịdị mma na arụmọrụ. INB providesR provides na-enye ọrụ ọfụma maka arịa ụlọ nkwari akụ ma na-enye ihe eji edozi ụlọ.
Ahụmahụ Ezigbo Mbara
Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị afọ iri abụọ na ahụmịhe n'ịhazi ihe eji eme ụlọ, ndozi ụlọ ndozi, na ntinye-saịtị, wdg.
Ngwaahịa Na-ekwe nkwa Ogo-
A ga-ahazi usoro maka ngwaahịa niile nke ọma ma gafee nyocha, gbaa mbọ hụ na n ’nkeji oge niile na-emezu ihe ndị ahịa chọrọ.
Ọnọdụ ala mara mma
Foshan Zhongsen （TRINITY） arịa ụlọ Co., Ltd. dị n'etiti etiti mbupu mmiri na Pacific, Indian na Atlantic, nke bụ mbupụ China na nso nso a na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Oceania, Middle East na Africa.
Ndị Na-eche Iche
Ma ha bụ ndị njikwa ọrụ nkwari akụ, ndị na-ahụ maka ndị ahịa, ndị na-ese ihe, ndị na-azụ ihe na ndị omenkà na ụlọ, ha niile nwere nzụlite dị iche iche ma na-ekerịta nnukwu agụụ maka ịrụ ọrụ dị ịrịba ama.
A na-ahazi ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị na-enye. Nke a bụ ihe ịma aka ndị pụrụ iche ha na-eweta.
Zhongsen bụ ezigbo onye mmekọ na onye nrụpụta ụlọ ndozi ndozi ma mepụtara.
Ọtụtụ n'ime ọrụ anyị na-ebuga bụ ndị ahaziri, anyị na-enwekwa ọfụma pụrụ iche ha na-eweta. Ndị na-emepụta ngwaahịa ụlọ anyị nwere ike inye ndụmọdụ ọkachamara bara uru banyere ihe na ịchọ mma ka ha na-ahụ na njiri mara nke ahụ ma sie ike. Ozugbo anabatara, ọ pụtara na ike nrụpụta anyị n’ime ụlọ nwere ike idozi ngwa na ngwa ahịa ndị ọzọ. Anyị nwekwara ike soro ihe ọsọ ọsọ iji gbochie usoro ịnwe oge siri ike. Kpoo TRINITY iji nye gi ihe ndozi ulo.
Mpaghara actorylọ ọrụ
Ngwọta Ahịa OEM
Nọgide na-achọ ngwaahịa nke gị ma na-emeziwanye nkà gị.
Shunda Foshan China ise Star Stonge Design ihg Hotel Hotel ha.
Omenala mere ka ọnụ ụlọ dị larịị setịpụrụ America JW Marriott Sfịto
Ulo ahia nke Itali nke Itali nke Itali nke Itali nke Itali ime ụlọ maka Italy 5 Star 4 Star anọ Oge House House